FANESORANA NY FILOHAN’NY FMF : Ara-dalàna ny fanapahan-kevitry ny Ligy, tsy ahina ny hisian’ny sazin’ny Fifa – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 7:43
Nitondra fanazavana ireo Filohana Ligy
Accueil/Songadim-baovao/Fanatanjahan-tena/FANESORANA NY FILOHAN’NY FMF : Ara-dalàna ny fanapahan-kevitry ny Ligy, tsy ahina ny hisian’ny sazin’ny Fifa
FANESORANA NY FILOHAN’NY FMF : Ara-dalàna ny fanapahan-kevitry ny Ligy, tsy ahina ny hisian’ny sazin’ny Fifa
Mbola raharaha mitana ny sain’ny mpanara-baovao ankehitriny ny fanapahan-kevitr’ireo Filohana Ligy izay nanaisotra tamin’ny toerany ny Filohan’ny Federasiona malagasin’ny Baolina Kitra, Arizaka Rabekoto Raoul. Betsaka ireo nanao tombatombana ny amin’ny mety hilatsahan’ny sazin’ny Fifa noho izao olana anatiny misy eo amin’ny Federasiona izao. Omaly, nanome toky ny ireo Filohana ligy fa tsy tokony hisy mihitsy sazy avy any amin’ny Fifa amin’izao raharaha izao satria ara-dalàna tanteraka ny fomba nandraisana ny fanapahan-kevitra.
Nitondra fanampim-panazavana mahakasika ilay fanapahan-kevitra nanaisotra amin’ny toerany ny Filohan’ny Federasiona malagasin’ny Baolina Kitra, afakomaly, ireo Filohana ligy miisa 21. Raha tsiahivina, nisy ny fanapahan-kevitra noraisin’ireto Filohana ligy miisa 21 ireo nandritra ny Fivoriambe tsy ara-potoana nataon’izy ireo. Izany dia nanaraka izay voarakitra ao amin’ny fitsipika mifehy ny Federasiona malagasin’ny Baolina kitra, ao amin’ny andininy faha 28, andalana faha-3, izay milaza fa tsy misy olona afaka manapa-kevitra manala olona ao anatin’ny mpikambana raha tsy amin’ny alalan’ny Assemblée Générale na fivoriam-be irery ihany. Noho izany indrindra, araka izany, no nandraisana ny fanapahankevitra.
Raha ny fanazavan’ny Filohan’ny Ligin’Ihorombe, Ratsimanotry Zafiarison, omaly, dia nisy ny fanapahan-kevitra avy any amin’ingahy Arizaka Rabekoto Raoul, ny Talata lasa teo, izay nilaza ny fanesorana ireo mpikamban’ny Komity mpanatanteraka miisa efatra, ahitana an’I Alfred Randriamanampisoa, Erick Raveloarison, Alexandre Lay Men, ary Sandrine Andriatsimialona, satria nolazaina fa ny nanaraka ny sata mifehy ny FMF. Mazava tsara anefa no voaresaka ao anatin’io andininy io voalaza etsy aloha io fa tsy misy olona afaka manala mpikambana ao amin’ny FMF raha tsy amin’ny alalan’ny fivoriambe irery ihany, amin’ny maha olom-boafidy azy ireo, na ny Filohan’ny FMF na ny mpikamban’ny Komity mpanatanteraka. “Raha toa ka nampiantso “Assemblée Générale” ny Filohan’ny FMF, ka nahazo ny fankatoavan’ny Ligy ny fanapahan-kevitra, izay vao azo esorina ny mpikambana”, hoy ny fanazavana.
Tsy ahina ny sazy
Nilaza ireo Filohana Ligy fa efa tena latsaka an-davaka ny Baolina kitra malagasy. “ Tsy izahay irery no mahatsapa izany fa ny Malagasy rehetra, izany hoe, izahay ireto no solontenan’ny mpilalao sy ny mpankafy kitra rehetra afaka mandray fanapahan-kevitra hampandrosoana ny baolina kitra”, hoy hatrany ny fanazavana. Nampahafantarina omaly fa efa intelo ireo Filohana ligy maro an’isa no nangataka “Assemblée Générale” na Fivoriambe teo anivon’ny FMF, saingy tsy nahazoana setriny mihitsy izany. Voalohany tamin’izany ny tamin’ny Marsa 2020, ny tamin’ny 21 Jona 2021, ary farany ny tamin’ny 06 Oktobra 2021 teo. Rariny, noho izany, raha tonga tamin’ny fandraisana fanapahan-kevitra fanonganana ny Filohan’ny Ligy maro an’isa. Izy ireo izay niantso ny rehetra ho tony amin’izao zava-misy rehetra izao. Tsy mitombina ihany koa, hoy izy ireo, ny filazana fa mety hisy ny sazy avy any amin’ny Federasiona iraisampirenena momba ny Baolina Kitra (FIFA), satria tsy nisy tsy ara-dalàna ny hetsika rehetra nataon’izy ireo. Raha toa tokoa ka misy ny fitsabahan’ny Fanjakana foibe amin’ny raharaha anatin’ny Federasiona dia izay vao ahina ny fisian’ny sazy. Ny tranga rehetra miseho ankehitriny anefa dia tsy misy idiran’ny Fanjakana mihitsy fa raharaha anatin’ny federasiona avokoa.
Omaly, tonga teny amin’ny toeram-piasan’ny Federasiona malagasin’ny Baolina kitra ireo Filohana Ligy nametraka ny antontan-taratasy mirakitra ny fanapahan-kevitra noraisina afakomaly. Ity fanapahan-kevitra ity izay voambara fa efa lasa any amin’ny Caf sy ny Fifa.
Faharesena indray no nobatain’ny Barean’I Madagasikara taorian’ny lalao nifandonana tamin’ny République Démocratique Congo (RDC), omaly. Nisaraka tamin’ny isa 2 no ho 0 ny baolina. Hatreto izany, mitana ny laharana farany ao amin’ny vondrona misy antsika isika, ao anatin’ny fifanintsanan’ny Amboara erantany atao any Qatar ny taona 2022. Mitarika vonjimaika aloha izany i Bénin manana isa 7, avy eo i RDC manana isa 5, i Tanzanie manana isa 4, ary isika izay tsy mbola manana isa hatreto. Andrasana ny lalao miverina izay atao ny alahady izao etsy Mahamasina.
HAINTRANO MISESY TAMIN’NY ONIVERSITE : Mpanolotsaina manokan’ny Filoha teo aloha no ao ambadika
ROA TAONA TEO AMIN’NY FITONDRANA : Manamafy ny Velirano nataony ny Filoha Andry Rajoelina
Covid-19 eto Analamanga : Nohamafisina ny fepetra arahina sazy